ပြင်သစ်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ပြင်သစ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 47°N 2°E﻿ / ﻿47°N 2°E﻿ / 47; 2
République française (ပြင်သစ်)
အလံတော် Diplomatic emblem of France
ဆောင်ပုဒ်: "Liberté, égalité, fraternité"
(လွတ်လပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်း၊ သဟာယ)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: La Marseillaise
ဥရောပတိုက်ရှိ မက်ထရိုပိုလစ်တန် ပြင်သစ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အနီ သို့မဟုတ် အစိမ်းရင့်)
– ဥရောပတိုက်အတွင်း (အစိမ်း နှင့် မီးခိုးရင့်)
– ဥရောပသမဂ္ဂတွင် (အစိမ်း)
ပြည်ထောင်စု တစိတ်တပိုင်းသမ္မတစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံသမ္မတနိုင်ငံ
• ဖရန့်ဘုရင်အဖြစ် ပထမ ကလိုဗစ် စိုးစံခြင်း
• Treaty of Verdun[upper-roman ၂]
၈၄၃ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁၀ ရက်
၉၈၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်
• သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ခဲ့
၁၇၉၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်
• EEC ထူထောင်ခဲ့ [upper-roman ၃]
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်
• လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ[upper-roman ၄]
၁၉၅၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်
၆၄၀,၆၇၉ km2 (၂၄၇,၃၆၈ sq mi) (အဆင့်: ၄၂)
၀.၈၆ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ)
၅၅၁,၆၉၅ km2 (၂၁၃,၀၁၁ sq mi)[upper-roman ၅] (၅၀)
၅၄၃,၉၄၀.၉ km2 (၂၁၀,၀၁၆.၈ sq mi)[upper-roman ၆] (50th)
• မေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ခန့်မှန်း
၆၇,၄၁၃,၀၀၀ (အဆင့် - ၂၀)
• Metropolitan France, estimate as of May 2021[update][[Category:Articles containing potentially dated statements from ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၂"။]]
၁၁၆/km2 (၃၀၀.၄/sq mi) (အဆင့် - ၈၉)
$၃.၂၃၂ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၉)
$၄၉,၄၉၂ (အဆင့် - ၂၅)
$၂.၉၃၈ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၇)
$၄၄,၉၉၅ (အဆင့် - ၂၄)
အလွန်မြင့် · ၂၆
ယူရို (€) (EUR)[upper-roman ၇]
CFP franc (XPF)[upper-roman ၈]
ဗဟိုဥရောပဒေသ စံတော်ချိန် (UTC+1)
ဗဟိုဥရောပဒေသ နွေရာသီစံတော်ချိန်[upper-roman ၁၀] (UTC+2)
Note: Various other time zones are observed in overseas France.[upper-roman ၉]
Although France is in the UTC (Z) (Western European Time) zone, UTC+01:00 (Central European Time) was enforced as the standard time since 25 February 1940, upon German occupation in WW2, witha+0:50:39 offset (and +1:50:39 during DST) from Paris Local mean time (UTC+0:09:21).
ပြင်သစ် (ပြင်သစ်: France အသံထွက် (ကူညီ·ချက်လက်) ) (တရားဝင်အမည်အားဖြင့် ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ)သည် အနောက်ဥရောပရှိ ပြင်သစ် မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသနှင့် အခြား ပင်လယ်ရပ်ခြား ပိုင်နက်ဒေသများ ပါဝင်သော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ် မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသသည် မြေထဲပင်လယ်မှ အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားနှင့် မြောက်ဘက်ပင်လယ်ထိလည်းကောင်း၊ ရိုင်းမြစ်မှ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထိလည်းကောင်း ကျယ်ပြန့်သည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့် အီတလီနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် အင်ဒိုရာနိုင်ငံနှင့် စပိန်နိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည်။ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားခြားလျက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ တည်ရှိသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးများက ဆဋ္ဌဂံပုံသဏ္ဌန်ရှိသော ပြင်သစ်မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသကို L’Hexagone (The “Hexagon” (သို့) ဆဋ္ဌဂံ) ဟု တခါတရံ ရည်ညွှန်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ နိုင်ငံ၏ (ပင်လယ်ခြားဒေသ ၅ ခု အပါအဝင်) ဒေသ ၁၈ ခုကို တစ်ခုတည်း ပေါင်းလိုက်လျှင် ၆၄၃,၈၀၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၄၈,၅၃၇ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေသည် ၂၀၁၉ ခု၊ ဇူလိုင်လစာရင်းအရ ၆၇.၀၃ သန်း ရှိသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ဗဟိုအစိုးရမှ ချုပ်ကိုင်ပြီး သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ နှစ်ဦးစလုံး အာဏာရှိသော သမ္မတနိုင်ငံစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်။ မြို့တော်သည် ပါရီမြို့ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးနှင့် ပင်မယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွားရေးဗဟိုလည်း ဖြစ်သည်။
သံခေတ်က လက်ရှိ ပြင်သစ်မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသသည် အင်ဒို-ဥရောပ ဆဲတစ်အနွယ်ဝင် ဂါး (Gaul) လူမျိုးများ အခြေချနေထိုင်ရာ ဖြစ်ခဲ့၏။ ရောမတို့သည် ထိုဒေသအား ဘီစီ ၅၁ ခုနှစ်တွင် တိုင်းပြည်ပြုခဲ့ကြသည်မှာ ၄၇၆ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်-ပြင်သစ်နွယ်ဖွားများ ရောက်လာကာ ဖရန်ရှားဘုရင့်နိုင်ငံတော် (Kingdom of Francia) မတည်ထောင်ခင်ထိ ဖြစ်သည်။ ၈၄၃ ခုနှစ်တွင် ချုပ်ဆိုသော ဗာဒန်စာချုပ် (Treaty of Verdun) သည် ဖရန်ရှားနိုင်ငံကို အရှေ့ဖရန်ရှား၊ အလယ်ဖရန်ရှားနှင့် အနောက်ဖရန်ရှားဟူ၍ သုံးပိုင်း ကွဲသွားစေသည်။ ၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်ဘုရင့်နိုင်ငံတော် (Kingdom of France) ဖြစ်လာသည့် အနောက်ဖရန်ရှားသည် နှစ်တရာစစ်ပွဲ (၁၃၃၇-၁၄၅၃) တွင် အောင်ပွဲရလိုက်ရာမှ အလယ်ခေတ် နှောင်းပိုင်းတွင် ဥရောပ၌ တန်ခိုးထွားလာသည်။ ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသည့် ရီနေးဆန်းခေတ်တွင် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုများ တခေတ်ဆန်းလာလျက်၊ ကက်သလစ်နှင့် ပြင်သစ်ပရိုတက်စတင့် (Huguenot) တို့၏ ဘာသာရေးစစ်ပွဲများ အတွင်းမှာပင် ကမ္ဘာတစ်လွှား ကိုလိုနီ အင်ပါယာများ တည်ထောင်လာကြသည်။ ၁၇ရာစု ၁၄ ယောက်မြောက် လူးဝစ်ဘုရင်လက်ထက်တွင် ပြင်သစ်သည် ဥရောပ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးအာဏာတို့ကို ကြီးစိုးထားနိုင်၏။ ၁၈ရာစု နှောင်းပိုင်း၌ ဘုရင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချရန် ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ခေတ်သစ်သမိုင်းတွင် အစောဆုံးသမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်လာပြီး ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံ၏ စံနမူနာအဖြစ် ဖော်ပြခံရသည့် လူသားနှင့် ပြည်သူတို့ အခွင့်အရေး ကြေညာချက်(Declaration of the Rights of Man and of the Citizens) မူကြမ်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
၁၉ရာစုတွင် နပိုလီယံ အာဏာရလာပြီး ပထမပြင်သစ် အင်ပါယာကို တည်ထောင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ နပိုလီယံ စစ်ပွဲ (Napoleonic War) (၁၈၀၃-၁၈၁၅)များသည် ပင်မဥရောပတိုက် (Continental Europe) ကြီး ဖြစ်လာစေသည်။ နပိုလီယံ၏ ပြင်သစ်အင်ပါယာ ပြိုကွဲပြီးနောက် ၁၈၇၀ခုနှစ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော တတိယပြင်သစ် သမ္မတနိုင်ငံတော်သည် အထွတ်အထိပ်ရောက်သော်ငြား အစိုးရအဆက်ဆက်မှာ အုတ်အော်သောင်းနင်းပင် ဆက်ခံကြရသည်။ ပြင်သစ်သည် ပထမကမ္ဘာစစ်တွင် အဓိကပါဝင်သူ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ကာ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်လည်း မဟာမိတ်ဘက်တော်သား ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၄၀ခုနှစ်တွင် မဟာမိတ်များ၏ သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၄၄ခုနှစ်တွင် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် စတုတ္တသမ္မတနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ပြီးနောက် အယ်ဂျီးရီးယားစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားသည်။ Charles de Gaulle ဦးဆောင်ပြီး ၁၉၅၈တွင် ပဉ္စမပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ကာ ယနေ့ ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်။ အယ်ဂျီးရီးယားနှင့် ကိုလိုနီနိုင်ငံ အားလုံးနီးပါး ၁၉၆၀ခုနှစ်များတွင် လွတ်လပ်ရေးရလာကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ပြင်သစ်နှင့် စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြသေးသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ဝိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံနှင့် အတွေးအခေါ် ပညာရပ်နယ်ပယ်များတွင် ကမ္ဘာ့ဗဟိုဌာနအဖြစ် ကာလရှည်ကြာ တည်ရှိခဲ့သည်။ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသများ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်သည်။ နှစ်စဉ် နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ၈၃သန်းဝန်းကျင် လာရောက်လည်ပတ်ရာ ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်ကာ GDPစစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခြောက်နိုင်ငံမြောက် အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်ဝယ်ယူမှုတွင် ဒသမမြောက် အများဆုံးဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ချမ်းသာမှုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံပါတ်၄ချိတ်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ လူမှုဘဝမျှော်မှန်းချက်နှင့် လူသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၍ ဗီတိုအာဏာသုံးနိုင်ကာ၊ နျူကလီးယား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့အရေးကိစ္စများတွင် အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)နှင့် ဥရောပဘုံဈေးကွက်(Eurozone)တွင် ထိပ်တန်းဦးဆောင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ ထိပ်သီးအင်အားကြီး(၇)နိုင်ငံအဖွဲ့(G7)၊ မြောက်အတ္တလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့(NATO)၊ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(OECD)၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့(WTO)နှင့် ပြင်သစ်စကားပြောနိုင်ငံများအဖွဲ့(La Francophonie)တို့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
၃ သမိုင်းမတိုင်မီ (ဘီစီ ၆ ရာစုမတိုင်မီ)
၄ နိုင်ငံရေးနှင့် အစိုးရok
၅ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနှင့် စစ်ရေးကိစ္စများ
၉ လူဦးရေပျံနှင့် နေထိုင်မှု
ပြင်သစ်လူမျိုးများက မိမိကိုယ်မိမိ ဖရန်စစ် (française) ဟု ခေါ်ကြသည်။ ထိုအသံကို မြန်မာတို့နားနှင့် ကိုက်ညီအောင် အသံဖလှယ်၊မြန်မာမှုပြုကြရာမှ ဖရန်စစ်မှ ပရန်သစ်၊ ပြန်သစ်၊ ပြင်သစ်ဟူ၍ ဖြစ်လာသည်ဟု ပညာရှင်များက ယူဆကြသည်။ သို့ရာတွင် အသံတစ်ခု၏ မူလရင်းမြစ်ကို အတိအကျ မှန်ကန်အောင် နောက်ကြောင်းလိုက်၍ မရနိုင်ပါ။
သမိုင်းမတိုင်မီ (ဘီစီ ၆ ရာစုမတိုင်မီ)
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁.၈ သန်းခန့်မှ ယနေ့ခေတ် ပြင်သစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည့် လူ့ဘဝ၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး သဲလွန်စဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီအောင် လူသားတို့သည်ရေခဲမြစ်ခေတ်ဟု သတ်မှတ်ထားသော ကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အစောပိုင်း (ဟုမ်းမနစ်) hominids များသည် ခြေသလုံးသားမုဆိုးစုကို ဦး‌ဆာင်ခဲ့သည်။
ပြင်သစ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့် ဘီစီ ၁၈,၀၀၀ ခန့်က Lascaux အပါအဝင်၊ Palaeo-lithic အထက်ပိုင်းမှ အလှဆင်ထားသောဂူများစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံးရေခဲမြစ်ခေတ် (ဘီစီ ၁၀,၀၀၀) အဆုံးတွင်ရာသီဥတုသည်ပိုမိုနုပျိုလာသည်။ ဘီစီ ၇၀၀၀ ခန့်မှအနောက်ဥရောပ၏ဤအစိတ်အပိုင်းသည်နီပိုလစ်ခေတ်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီး နေထိုင်သူများသည် ရုံးထိုင်အလုပ်သမား ဖြစ်လာသည်။
၄ထောင်စုနှစ် နှင့် ၃ထောင်စုနှစ်အကြားတွင် လူဦးရေနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးသည် ၃ ထောင်စုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ကျောက်ခောတ်‌သစ် ကာလမှ ဧရာမကျောက်တုနေးများဖြင့်တည် ဆောက်ထား‌သော‌ နေရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင် အလွန်ထူထပ်သော (ကားနက်ခ်)Carnac ကျောက်တုံးများ (ဘီစီ ၃၃၀၀ ခန့်) ရှိသည်။
ရှေးဟောင်းပစ္စည်း (ဘီစီ ၆ ရာစုမှအေဒီ ၅ ရာစု)
ဘီစီ ၆၀၀ တွင် (ပိုစီယာ)Phocaea မှ (အိုင်ယွန်နီယမ် ဂရိ)Ionian Greek များသည်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် မက်ဆီလီယာ (မျက်မှောက်ခေတ် မာဆေး) ကိုလိုနီနယ်မြေကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဂဲလ်ဆဲလ်တစ် လူမျိုးအချို့သည် ပြင်သစ်အရှေ့ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘီစီ ၅ ရာစုမှ ၃ ရာစုအတွင်း အခြားနိုင်ငံများသို့ တဖြည်းဖြည်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ ပဲရနီးစ် နှင့် မြေထဲပင်လယ်အကြားရှိ ဆဲလ်တစ် အခြေချနေထိုင်ရာ နယ်မြေများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ခေတ်သစ်ပြင်သစ်၏ နယ်နိမိတ်များသည် အကြမ်းအားဖြင့် ဆဲလ်တစ်များနေထိုင်သော ရှေးဟောင်းဂေါလ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထိုစဉ်က ‌ဂေါလ်သည် သာယာဝပြောသော တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး တောင်ဘက်စွန်းမှာဂရိနှင့်ရောမယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုများစွာရှိခဲ့သည်။
ဘီစီ ၃၉၀ ခန့်တွင် ဂဲလ်လက်ခ်မင်းသား ဘရဲနစ် နှင့်သူ၏စစ်တပ်များသည် အဲလ်ပ် မှတစ်ဆင့် အီတလီသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အလီယာတိုက်ပွဲတွင် ရောမတို့ကိုအနိုင်ယူပြီးရောမမြို့ကို ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ဂဲလ်လက်ခ် ၏ကျူးကျော်မှုသည် ရောမမြို့ကို အားနည်းသွားစေပြီး၊ ဂေါလ်သည် ဘီစီ ၃၄၅အထိ ရောမနှင့် တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် မချုပ်ဆိုခင်အထိ ဒေသကိုဆက်လက်နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရောမနှင့် ဂေါလ် များသည်နောက်ရာစုနှစ်များအတွင်း ရန်သူအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိပြီး ဂေါလ်သည် အီတလီ၌ ဆက်လက်၍ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘီစီ ၁၂၅ ခုနှစ်ခန့်တွင်‌ ဂေါလ်၏တောင်ဘက် Provincia Nostra ("Our Province") ဟုခေါ်သော ယင်းဒေသကို ရောမတို့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဂျူးလီယက်ဆီဇာသည် ‌ဂေါလ်၏ကျန်အပိုင်းများကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ၅၂ဘီစီ တွင် ဂဲလ်လက်ခ် မင်းသား ဗက်ဆင်ဂျဲတရက်စ် ၏ပုန်ကန်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ ပလူးတာရက်ခ် နှင့်ပညာရှင် ဘရန်ဒန် ဝုဒ် တို့၏ရေးသားချက်များအရ ဂဲလ်လက်ခ်စစ်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့်မြို့ကြီး ၈၀၀၊ လူမျိုးစု ၃၀၀၊ လူတစ်သန်းကိုကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားပြီး၊ သုံးသန်းမှာစစ်ပွဲတွင်သေဆုံးခဲ့သည်။
ဂါလ၏ကျန်အပိုင်းမျ ားကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဘီစီ ၅၂ တွင် Gallic မင်းသား Vercingetorix ၏ပုန်ကန်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်
သမိုင်းမတိုင်မီ (ဘီစီ ၆ ရာစုမတိုင်မီ)[ပြင်ဆင်ရန်]
ပြင်သစ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့် ဘီစီ ၁၈,၀၀၀ ခန့်က Lascaux အပါအဝင်၊ Palaeolithic အထက်ပိုင်းမှ အလှဆင်ထားသောဂူများစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံးရေခဲမြစ်ခေတ် (ဘီစီ ၁၀,၀၀၀) အဆုံးတွင်ရာသီဥတုသည်ပိုမိုနုပျိုလာသည်။ ဘီစီ ၇၀၀၀ ခန့်မှအနောက်ဥရောပ၏ဤအစိတ်အပိုင်းသည်နီပိုလစ်ခေတ်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီး နေထိုင်သူများသည် ရုံးထိုင်အလုပ်သမား ဖြစ်လာသည်။
ဂါလ၏ကျန်အပိုင်းမျ ားကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဘီစီ ၅၂ တွင် Gallic မင်းသား Vercingetorix ၏ပုန်ကန်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ဘာသာရေးနှင့် စပ်နွှယ်ခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံ (secular country)ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ပေးထားသည်။ ပြင်သစ် ဘာသာရေး မူဝါဒသည် “laïcité” ဟူသော ပြည်သူတို့အား ဘာသာတရားနှင့် စပ်နွှယ်ခြင်းမရှိစေသည့်၊ အစိုးရနှင့် ဘာသာရေးကျောင်းတို့ကို ကြပ်မတ်စွာ ခွဲခြားထားသည့် အယူအဆအပေါ် အခြေခံထားသည်။
↑ France။ United Nations Group of Experts on Geographical Names။
↑ Religions in France | French Religion Data | GRF။
↑ "Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density" (PDF)။ Demographic Yearbook။ United Nations Statistics Division။ 2012။4September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Surface water and surface water change။ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)။
↑ "France Métropolitaine" (2011). INSEE.
↑ Demography – Population at the beginning of the month – France (2019)။
↑ Demography – Population at the beginning of the month – Metropolitan France (2019)။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ World Economic Outlook Database, April 2021။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey။ Eurostat။
↑ Human Development Report 2020 (in en)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (15 December 2020)။
↑ Time Zone & Clock Changes in Paris, Île-de-France, France။
ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist foragroup named "upper-roman", but no corresponding <references group="upper-roman"/> tag was found
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြင်သစ်နိုင်ငံ&oldid=740689" မှ ရယူရန်
ဥရောပ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၃:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။